Nhau - Ita sebhizinesi rehurumende, uye ita basa rakanaka mukudzivirira denda nekudzora uye kutangisa basa nekugadzira.
Mukutarisana nedenda, Beijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd. yakapa mutambo wakazara kumweya wekuve bhizinesi rehurumende rekugadzira, uye yakatangazve basa zviri pamutemo musi wa10 Kukadzi 2020. Ndichiri kuita basa rakanaka mukudzivirira uye kudzora denda, tichakasira kutangazve basa nekugadzira, uye zvishoma nezvishoma titangezve kugadzira uye kushanda kuti tive nechokwadi chekuendeswa kwemirairo yepamba neyekunze.
1. Matanho ekudzivirira denda achaitwa zvizere kusimbisa vashandi.
Denda iri zvakare bvunzo uye kurovedza muviri kumabhizinesi. Munguva yekukurumidzira, inogona kuratidza zvirinani mutoro wemagariro uye kutarisirwa kwevanhu kwemabhizinesi ehurumende. Kuitira kuti vashandi vanzwe vakasununguka uye vatarise pabasa ravo, kambani inonyatso shandisa matanho ekudzivirira denda, sekutarisa tembiricha pakupinda mufekitori, midziyo uye kugovera zvinhu zvekudzivirira denda, kuuraya utachiona munzvimbo dzehofisi, kudya kwakapatsanurwa mukati. iyo canteen, kuyera tembiricha uye disinfection yemabhazi eshuttle, kuitira kuve nechokwadi chekuchengetedza uye kuvimbiswa nharaunda yekushanda yevashandi.
2. Kutangwazve kwebasa nekugadzirwa kuchaitwa nenzira yakarongeka, uye kugadzirwa uye kuendesa kunodzokera zvishoma nezvishoma kune zvakajairika.
Kuti ipedze mabasa ebhizinesi epagore uye kusangana nekuunzwa kwevatengi mirairo, kambani yakaita yakadzama yekugadzira kuronga kuronga, uye nekushingairira kusimudzira kurongeka kwezvinhu zvekugadzira, kuiswa kwevashandi vakadzoka, pane-saiti kugadzirwa manejimendi uye rimwe basa, kugadzira. kugona kwakadzikama kudzoreredza, kuve nechokwadi chekuendeswa kwevatengi mirairo.
Akazvarwa nezuva, bhururuka uchipikisana nemhepo, shinga mhepo nemafungu, dzoka sekudaro! Tinopa rukudzo kumagamba ari kurwisa denda iri pamberi, asi zvakare tinopa rukudzo kumunhu wese ari kushanda munzvimbo dzakajairwa, chinyararire. Ngatibatanei semumwe uye tishande pamwe chete kuti tikunde muhondo yekurwisa COVID-19 nekukurumidza.